Ny vehivavy sy ny fifidianana solombavambahoaka, omaly tsy miova toa volan-kakafotra ? - Politika
Sahala ny zava-misy any amin’ny ankamaroan’ny firenena afrikana samihafa, mbola fanamby lehibe eo amin’ny fitantanana ara-demokratika ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eto Madagasikara.
Ao anatin’ny fiomankomanana ny amin’ny anatanterahana ny fifidianana Solombavambahoaka eto Madagasikara, dia fantatra tamin’ny fanambarana nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), fa tsy misy afa-tsy ny 15%-n’ireo kandidà milatsaka ho fidiana no vehivavy ; salanisa izay heverina fa mbola miiba amin’ny fanambanin’ny fetra tokony ho azo ekena, dia ny 30 % ary lavitry ny afo koa ny kitay ny amin’ny fanatrarana ny fampimirana lenta ao anatin’ny dingam-panatanterahana ny fifidianana. Ankoatra ny resaka salanisa, toe-javatra mbola mahavaka koa raha mifototra hatrany amin’ny firotsahana an-tsehatry ny vehivavy eo amin’ny tontolo politika ; voafetra ny maha to teny azy, na amin’ny maha kandidà na koa rehefa tonga olom-boafidy.
Tsy ampy fanentanana
Ady mafana hatreto ny firotsahan-kofidian’ny vehivavy, saingy mbola lala-mideza koa no diavina mandritra ny fotoam-piasana. Rehefa nametrahan’ny vahoaka fitokisana indray ka lany ho solombavambahoaka, vitsiana amin’ny andriambavilanitra no misahana andraikitra ao anatina rafitra mpanapa-kevitra eo anivon’ny antenimierampirenena ary misedra olana koa amin’ny tsy fahazoana fanakatoavana avy amin’ny antoko niaviany. Mitoetra ho vato misakan-tatatra amin’ny firotsahana an-tsehatry ny vehivavy eo amin’ny sehatra politika hatreto ny lafiny finoana sy ny fomba ary ny fanaom-piaraha-monina. Eo koa hevi-draikitra samihafa noho ny kolontsaina, ka manabanty hatrany ny anjara asa aman-toeran’ny vehivavy. Ankoatra ireo ny tsy fisian’ny fepetra hoenti-manentana ny tokony handraisan’izy ireo anjara sy ny faharefoan’ny fiantraikan’ny lalàna, ka anasokajiana azy hatrany ho « fanaka malemy », ka tsy tokony hitsabatsabaka amin’io sehatra ilan-kazondamosina io. Mbola tsy tratra ny tanjona, na voasoritra ao anatin’ny Lalàmpanorenan’i Madagasikara aza ny fimiran’ny lahy sy ny vavy, ka tafiditra ao anatin’izany ny « sehatr’asam-panjakana sy ao anatin’ny fiainana ara-politika » ary eo koa ny paika samihafa hoenti-mampandroso ny vehivavy ao anatin’ny politikam-pirenena.
Anokafana ady hevitra
Na eo aza izay ezaka mendri-piderana izay, mbola mijanona lamako tsy mipaka ka tsy misy akony mivaingana ireo fepetra noraisina ary tsy ahazoam-bokatra azo tsapain-tanana izany eo amin’ny fampitoviana lenta ny lahy sy ny vavy. Mirazotra amin’izay koa, tao anatin’ny roapolo taona izao, ny fiarahamonim-pirenena sy ny vehivavy malagasy dia tsy mitsaha-mitolona. Mitombo an-dalana koa ny tambajotra hoenti-mamondron-kery ho azy ireo mba hahazoana manao antso sy mifampiraharaha amin’ireo mpanapa-kevitra sy indrindra koa ny olom-pirenena. Izany dia mba hahazoana mahita taratra ao anatin’ny rafi-pitantanana ny firenena io fampimirana ny lahy sy ny vavy io efa noraketin’ireo Lalàmpanorenana nifandimby nitondrana teto amin’ny Nosy. Ireo mpiara-miasa amin’i Madagasikara koa dia tsy mitsaha-manohana ireo fandania-mondron-kery tontosaina amin’io lafiny io. Nahazoana nanokatra loabary andasy sy nitondra tamin’ny ady hevitra ny fisian’ireo finiavana ireo, saingy misy hatrany ny volo manoha randrana na eo aza ny piti-pandrosoana azo tarafina, dia mbola voafetra ary marefo izany. Porofon’ireny ny tsy faharisihan’ny vehivavy mirotsaka ho kandidà mandritra io fifidianana solombavambahoaka ho tanterahina ny 27 mey io. Toy ny ahoana, noho izany, ny tokony handraisana sy hisintomana lesona manoloana io fihemorana io ?
Noho ny tsy fisian’ny atontan-kevitra azo ampiasaina, manano sarotra hatreto ny fahazoana manombantombana ny isan’ny vehivavy malagasy efa nirotsaka hofidina solombavambahoaka. Famantatra azo andrefesana ny fahasarotan’ny firotsahan’izy ireo eo amin’io sehatra io hatreto ny fahavitsian’ny vehivavy solombavambahoaka lany sy niasa teny amin’ny parlemanta, taorian’ireo fifidianana nifanesy teto amin’ny firenena. Ny taona 2003 ka hatramin’ny 2007, tsy nisy afa-tsy 10 monja ny vehivavy tafiditra teny Tsimbazaza, izany hoe 6%-n’ireo solombavambahoaka voafidy. Nandritra ny fotoam-piasana ny taona 2007 ka hatramin’ny taona 2009 kosa dia 7%. Nisy kosa ny fihatsaran’ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’io lafiny fisoloan-tena io tamin’ny Tetezamita satria nahatratra 64 ny andriambavilanitra mpikamban’ny Kongresin’ny tetezamita, tamin’ireo 366 niasa tao amin’io rafitra nasolo toerana ny antenimiera io tamin’izany fotoana. Izany hoe 17% tamin’izy ireo no vehivavy. Anisan’ny nitondra vokatra ka nahitana taratra io fandrosoana kely io ny Tondrozotra ho famahana ny krizy teto Madagasikara, izay nanome vahana ny fidirana an-tsehatr’ireo rado haingon’ny vozona. Tamin’ny taona 2013 kosa, nandritra ny fifidianana solombavambahoaka, ny 13%-n’ireo lohalisitry ny mpilatsaka ho fidiana dia vehivavy avokoa. Raha mitaha amin’ny zava-nisy tamin’ny taona 2013 ; izay nahatratra 204 ny andriambavilanitra kandidà, dia latsaka efapolo isa no sahy lapa amin’ity fifidianana Solombavambahoaka hatao ny 27 mey 2019 ity amin’ny kandidà miisa 162. Izany dia ahitana taratra ny olam-pirotsahan-kofidin’ny vehivavy malagasy. Ahoana noho izany ny fomba hahazoana manazava ireny fahasarotana ireny ?
Azo hazavaina miainga amin’ny fanaom-piarahamonina sy ny fisian’ny hevi-draikitra eo anivon’ny mpiara-belona ny fahambanian’ny salanisan’ny vehivavy mandray anjara amin’ny fifidianana solombavambahoaka sy ny sehatra politika samihafa. Foto-piheverana izay mametraka ny andriambavilanitra amin’ny anjara asa manokana ny amin’ny fikarakarana tokantrano. Zary lasa kitra babeny sy manilika azy eo amin’ny fiainam-bahoaka sy ny fiarahamonina ary ny raharaham-panjakana sy ny fitantanana ny tanàna izany, satria sokajiana ho anjara andraikitry ny lehilahy, ka miteraka fanabantiana ny amin’ny fiheverana fa tsy ilaina ny anjara birikin’izy ireo. Foto-pisainana mitondra fanavakavahana izany, ka lasibatra hatrany ny vehivavy eo amin’ny andavanandrom-piainany sy amin’ny sehatra rehetra : fanapahana hevitra, fahazoana misitraka ny zony sy ny fahafahana fototra, tahaka ny zo ara-toe-karena, ara-piarahamonina sy politika. Miantraika amin’ireo vehivavy izany, raha toa ka mahery vaika ny fametrahana ny hevi-draikitra, satria zary lasa misalasala sy mihevi-tena ho tsy manana ny rariny izy ireo ka tsy afa-mihevitra ny fiainana politika na maneho ny fomba fijeriny, indrindra koa fa ny mandray anjara mavitrika. Ny fanadihadiana nataon’ny « Afrobaromètre » nivoaka tamin’ny taona 2014 dia milaza fa ny ankamaroan’ny mponina eto Madagasikara (62% tamin’ireo tranga nanaovana fandinihana) dia mihevitra fa havanana kokoa ny lehilahy raha hampiandraiketina toerana politika. Sarotra ho an’ny vehivavy amin’izay fotoana izay ny hahazo fototra ara-pifidiana mafy orina raha mbola tsy miova ny fomba fihevitra sy ny foto-pisainana. Mijanona ho laharam-pahamehana ny asa hoenti-mampahalala ny mpiara-belona amin’ny tranga toy itony ary tsy misy ny fepetra raisina mety hahazoana vokatra raha tsy misy ny fiovana eo amin’io sehatra io.
Tady telo olana saro-bahana amin’ny fandraisana anjaran’ny vehivavy amin’ny fifidianana solombavambahoaka koa ny tsy maintsy hanetsehana loharanom-bola goavana mba hahafahana mijoro ho kandidà. Amin’ny ankapobeny, marefo amin’ny lafiny ara-bola sy ara-tsosialy ny ankamaroan’izy ireo. Misy, ohatra, no lasibatry ny fahaverezan’asa na mitana andraikitra ihany fa amina asa tsy mahavelona ary eo koa ny fahasahiranana ny amin’ny fahazoana misambo-bola amin’ny hafa. Lafin-kevitra hahazoana manazava ny antony mampihemotra ny vehivavy tsy hiatrika ny fifaninanana koa ireny olana ara-bola ireny. Iaraha-mahalala rahateo fa niakatra be ny saram-pirotsahan-kofidiana amin’io fifidianana hatao ny 27 mey io, ka isan’ny manampy trotraka ny singory tsy hahafahan’ny vehivavy miroso izany. Vidin-dafo noho izany ny fifaninanana politika, ka tsy hahazo toerana mihitsy ny andriambavilanitra kely vovokaina amin’ny ara-bola. Ohatra raisina ny momba ireo vehivavy kandidà tamin’ny 2013. Ny ankamaroan’izy ireo dia niainga avy amin’ny tontolon’ny fandraharahana nialoha ny nahazoana tantsoroka avy amin’ny antoko politika. Eo amin’izay lafiny izay, mitana anjara asa goavana ireto farany satria afa-manolotra kandidà ary manetsika vola koa hoenti-manohana. Ankoatra io, ny antoko politika ihany koa dia afaka manome sehatra ilay kandidà vehivavy mba ho fantatr’olona sy hisitraka fankatoavana. Miteraka fanomezan-danja ny fahaiza-manaony eo anivon’ny rafitra mpitantana izany, mba tsy hijanona ho mpananty ran-kena fotsiny tahaka ny amin’ny fampielezan-kevitra. Lalana azo trandrahina ka hahafahana mampahomby ny fampimirana lenta sy ny firotsahana an-tsehatry ny vehivavy amin’ny politika noho izany ny fandraisana andraikitry ny antoko.
Anisan’ny vato manoha riana amin’ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’ny fifidianana solombavambahoaka koa ny fomba fihevitr’izy ireo ny amin’izay tokony ho anjara asany.
Anisan’ny vato manoha riana amin’ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’ny fifidianana solombavambahoaka koa ny fomba fihevitr’izy ireo ny amin’izay tokony ho anjara asany. Ny fisalasalan’izy ireo handray andraikitra koa dia anisan’ny antony mampitsoa-pahana azy tsy ho isan’ny kandidà. Fisalasalana izay mifandrohy amin’ny tsy fahatokisan-tenany aloha voalohany indrindra izay hamafisin’ireo fitsaran’ivelany miiba mianjady aminy koa. Fisalasalana ihany koa izay vokatry ny fiheverana fa ny tontolo politika dia « maloto » sy feno herisetra ary tsy lazaina intsony ireo fomba fanao politika tsy mendrika ka mahatonga firaviravizan-tanana ho an’ny sasany. Laharam-pahamehana noho izany ny fampiofanana ny vehivavy mba hahazoany fahalalana fototra momba ny fanaovana politika; ny fanamafisana ny fahaiza-manaony ary koa ny fampianarana azy handresy ny tahony ary hanosika hirotsaka an-tsehatra amin’ny politika tahaka ny amin’ny fifidianana solombavambahoaka. Noho izany, tsy tambo isaina ny mety ho sakana, na ara-potokevitra na ara-kolontsaina na ara-toe-karena, fa mety ho antony manokana avy amin’ny vehivavy koa. Na izany aza, tsy zava-baovao akory izy ireny. Ilàna paikam-panatonana mampiaty ireo endrik’olana samihafa, ary tsy azo avakavahana tahaka ny ketsa. Ny fampiatiana ny vehivavy amin’ny tontolo politika, noho izany, dia mitaky koa indrindra indrindra ny fisikinamponitry ny lehilahy.
Eo anatrehan’izay, ilaina ny fandraisana fepetra ary miainga amin’ny lalàna izany. Hatreto, ny finiavana rehetra mikendry ny fampimirana ny fahazoana misolontena na farafaharatsiny mitovitovy tantana dia rano raraka an-tany avokoa. Tanjona kendrena ny hahazoana ilay fetran’isa hatramin’ny 30% izay mbola mifanalavitra amin’ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Dingana voalohany amin’izany ny fametrahana lalàna momba ny zara sitrahina. Ireo tsy miombon-kevitra ny amin’ny fametrahana io zara sitrahina io dia mety hilaza fa tsy hanome lanja ny fahaiza-manao izany, fa hampahazo laka ny fifamatorana amin’ny fiziana maha lahy na maha vavy fotsiny ihany. Kanefa mbola mila halavirina toa fasam-bao hatrany ny hevi-draikitra manoloana izany, raha manao fampitaha amin’ny isan’ny vehivavy sy ny lehilahy eo amin’ny tontolon’ny fampianarana ambony, ireo vehivavy mpitsara, ny administratera sivily, ny mpampianatra sy amin’ireo asa heverina fa manana ny hasiny. Fahaiza-manao mitovy lenta no resahina ? Raha iverenana ny resaka fifidianana solombavambahoaka, amin’ny fomba ahoana no hahazoan’ny vehivavy mandray anjara amin’ny fametrahana antenimiera tena mahasolo tena ny vahoaka, raha toa ka ny antsasa-manilan’ny olom-pirenena aza miraviravy tanana tsy handray anjara amin’izany ?
Jessica Ranohefy, mpisolontena ireo firenena ao anatin’ny EISA
Antenimierampirenena Fandraisana anjaran'ny vehivavy Pôlitika